Uyisebenzisa kanjani iFont Awesome kwi-Illustrator kunye nezinye iiNkqubo | Martech Zone
Uyisebenzisa kanjani iFont Awesome kwi-Illustrator kunye nezinye iiNkqubo
NgoLwesibini, Julayi 6, 2021 NgoLwesibini, Julayi 6, 2021 Douglas Karr
Unyana wam wayefuna i ikhadi leshishini ye-DJ yakhe kunye neshishini lokuvelisa umculo (ewe, uphantse wafumana i-Ph.D yakhe kwiMathematika). Ukugcina indawo xa ebonisa zonke iitshaneli zakhe zentlalo kwikhadi lakhe leshishini, sifuna ukubonelela ngoluhlu olucocekileyo sisebenzisa ii-icon kwinkonzo nganye. Endaweni yokuthenga iilogo nganye okanye ingqokelela kwindawo yesitokhwe, sisebenzise Font Awesome.
Ifonti eyoyikekayo ikunika ii-icon zevektha ezinokuchazwa kwangoko-ubungakanani, umbala, isithunzi sokulahla, nayo nayiphi na into enokwenziwa ngamandla e-CSS.
Iifonti zisekwe kwi-vector kwaye zinokuchaphazeleka kwiprojekthi yakho, ngenxa yoko zilungele ukusetyenziswa kwizicelo ze-graphical desktop ezinje nge-Illustrator okanye i-Photoshop. Ungawaguqula abe ziinkcazo kwaye uwasebenzise kumzekeliso.
Ifonti eyoyikekayo isetyenziswa ngokubanzi ukongeza ezi logo kunye nezinye ii icon kwiiwebhusayithi, kodwa awunakuqonda ukuba unokukhuphela ifonti yoqobo ukuyifaka kwi-Mac okanye kwiPC yakho! Ifonti yeTypeType (ifayile ye-ttf) yinxalenye yefayile Ukukhuphela. Faka ifonti, qala kabusha i-Illustrator kwaye uyasebenza kwaye uyasebenza!
Akukho sidingo sokukhumbula umlinganiswa ngamnye okanye wenze into elungileyo, nantsi indlela yokusebenzisa ifonti:
Vula Ubungakanani bamagama beCheatsheet kwisiphequluli sakho.
Vula i-Illustrator okanye i-Photoshop (okanye enye isoftware).
Cwangcisa ifonti kwi Font Awesome.
Kopisha kwaye unamathisele umlinganiswa ovela kwi-cheatsheet kwifayile yakho.
Kukho konke okukho kuyo!
Uyisebenzisa kanjani iFont Awesome kwi-Illustrator
Here’s a quick video on how I find icons on Font Awesome and then use them within my Illustrator files.
Uyisebenzisa kanjani iFonti eyoyikekayo ngeFotohop, i-Illustrator, kunye nezinye iiQonga leDesktop.
Nantsi imbonakalo entle yevidiyo malunga nendlela yokusebenzisa ifonti emangalisayo nge-Illustrator (okanye amanye amaqonga edesktop).
Yenza iNkcazo yeeFonti yakho
Inye kuphela into ekufuneka uyigcinile engqondweni kukuphepha ukuyisebenzisa kwiqonga elingashumeki ifonti kwaye ifuna ukuba ifakwe kwinkqubo. Ukuyisebenzisa kwiLizwi, umzekelo, kuya kufuna ukuba ummkeli wakho abe nefonti elayishwe kwinkqubo yabo ukuze ayibone. Kwi-Illustrator okanye kwi-Photoshop, ungasebenzisa iiNgcaciso zoGuquko ukuguqula ifonti ibe ngumfanekiso we vector
In Umzekeliso, ungasebenzisa i-Yenza i-Outline ukuguqula ifonti ibe ngumfanekiso we vector. Ukwenza oku, sebenzisa isixhobo soKhetho kwaye ukhethe uhlobo> Yenza iiNkcazo. Ungasebenzisa kwakhona umyalelo webhodibhodi Ctrl + Shift + O (Windows) okanye Command + Shift + O (Mac).
In Photoshop, cofa ekunene kumaleko wokubhaliweyo. Beka imouse yakho ngaphezu kwesicatshulwa sokubhaliweyo (hayi i [T] icon) kwaye ucofe ekunene. Ukusuka kwimenyu yentsingiselo, khetha Guqula kwiMilo.
Khuphela ifonti eyoyikekayo
Ukubhengezwa: Sa-odola amakhadi oshishino ukusuka Moo kwaye sinonxibelelwano lwethu olungasentla.
tags: ikhadi leshishinimakhadi o shishinoGuqula ifonti ibe yinkcazoGuqula ifonti ibe yimiloyenza ulwandlalo lwefontiyenza ulwandlalodjUkukhuphela ifontiUkukhuphela ifonti ngokumangalisayoifonti eyoyikekayokwenziwa kanjaniindlela yokwenza iimpawu zentlaloIconumzobimonstreaukhonaamakhadi aphoPhotoshopUmvelisiImifanekiso yeendaba ezentlalottfvector
Izinto eziphambili zoSetyenziso oluSebenzayo lwePush Push Isaziso